Olan’ny fotodrafitrasa, sakafo, fambolena.. : hodinihina ny fampandrosoana ny any atsimo | NewsMada
Olan’ny fotodrafitrasa, sakafo, fambolena.. : hodinihina ny fampandrosoana ny any atsimo
Par Taratra sur 11/06/2021
“Ny fampandrosoana sosialy sy ny maha olona, ny fotodrafitrasa, ny fanjarian-tsakafo hijerena koa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampiroboroboana sehatrasa samihafa, ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny indostria ary ny fahaiza-manao eny anivon’ny faritra.”
Ireo ny lohahevitra dimy hamantohana ny dinikasa manokana handinihana ifotony ny fampandrosoana ny any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara, ny faritra Androy sy ny faraitra Anosy, anio sy rahampitso, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa.
Handray anjara amin’izany ny manampahefana eny an-toerana na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry, ny mpisehatra amin’ny sehatra tsy miankina, indrindra ny fitondram-panjakana na ny minisitra voakasika amin’izany fampandrosoana izany. Eo koa ny filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra, hitarika izany dinika izany.
“Voalohany tokoa eo amin’ny tantaran’ny firenena ny handinihana akaiky sy maharitra ny fampandrosoana ny faritra atsimo”, hoy izy.